Busy and Pretty Weekends! | The World of Pinkgold
Busy and Pretty Weekends!
Posted on February 1, 2009 by cuttiepinkgold
ရုံးပိတ်ရက်တွေဆို ကျွန်မသိပ်အလုပ်များတယ်။ အရင်တုန်းကဆို ပိတ်ရက်တွေ ကျွန်မကို အိမ်မှာ ဖမ်းမိဖို့ဆိုတာ တော်တော်ခက်ခဲတာ။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ချိန်းပြီး သွားချင်ရာ လျှောက်သွားနေရော။ ခုတော့ အခြေအနေတွေက မတူတော့ဘူးလေ။ အိမ်မှာ မနေလို့ကို မဖြစ်တော့ဘူး။ အမကြီး အမိအရာဆိုသလို ညီမလေးကို စောင့်ရှောက်ရမယ့် တာဝန်တွေအပြင် ချက်ကျွေးရမယ့် တာဝန်ကလည်း ရှိလာပြီကိုးရှင့်။
ကျွန်မှာ သောကြာနေ့ညနေကတည်းက အားတယ်ဆိုတာ မရှိတော့ဘူး။ ကျွန်မ ညီမလေးက ပညာရေးတက်ကသိုလ် တက်နေတာလေ။ ကောင်းတာတစ်ခုက သူတို့ကျောင်းက အဆောင်ပေးတယ်ရှင့်။ အရင်တုန်းက ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားတွေလိုပေါ့။ ပုဂံဆောင်တို့၊ တကောင်းဆောင်တို့၊ န၀ဒေးဆောင်တို့ ဆိုတာတွေမှာ B.Ed က ကျောင်းသူတွေ နေကြရတာ။ ညီမတော်က သောကြာနေ့ဆိုရင် အဆောင်က ထွက်လာပြီး ကျွန်မအိမ်မှာ လာအိပ်တာ။ တနင်္ဂနွေနေ့ ညနေဘက် ခြောက်နာရီမထိုးခင် အဆောင်ပြန်ဝင်ရတာ ဆိုတော့ အိမ်မှာ ညနေ ငါးနာရီလောက်ထိတော့ သူကရှိနေတာပေါ့။ အဲဒီတော့ ကျွန်မမှာလည်း သူမပြန်မချင်းကို သူ့အတွက် လုပ်ပေးရ ကိုင်ပေးရ၊ ချက်ပြုတ်ပေးရ၊ အဆောင်မှာ တစ်ပတ်စာစားဖို့ ဟင်းတွေ လုပ်ပေးရနဲ့ အားကို မအားနိုင်ပါဘူး။ သူငယ်ချင်းတွေ အရင်တုန်းကဆို မေးလေ့ရှိတယ်။ ပိတ်ရက် ဘယ်သွားလဲ၊ ဘယ်ရောက်နေလဲ ဆိုပြီးတော့။ ဟုတ်ကဲ့ ပိတ်ရက်ဆို ကျွန်မမှာ မီးဖိုချောင်ကကို မထွက်ရပါဘူးရှင်။
ညီမလေးကလည်း အဆောင်ကို မပြန်ခင်ကျွန်မကို ကြိုမှာထားခဲ့တာ။ မထက် သောကြာနေ့လာရင် ဘာဟင်းချက်ထားနော် ဆိုပြီးတော့။ သူစားချင်တဲ့ ဟင်းကို မနက် မီးလာလာ၊ မလာလာ ချက်ထားရတာပေါ့ရှင်။ ဒါမှ သူညနေအိမ်ပြန်ရောက်ရင် အဆင်သင့်စားရမှာကို။ ကျွန်မက သောကြာနေ့ဆို ရုံးတက်ရသေးတာနဲ့ ဘာနဲ့ ညနေကို ခုနစ်နာရီလောက်မှ အိမ်ပြန်ရောက်တာကိုး။ စနေနေ့ဆိုလည်း ဒီလိုပါပဲ ရုံးက နေ့တစ်ဝက် တက်ရသေးတော့ မနက်ရုံးမသွားခင်ကတည်းက မမလေးစားဖို့ နေ့လည်စာက အသင့်ဖြစ်အောင် ချက်ရသေးတာ။ ဒီအချိန်မှာ မီးတွေ ဘာတွေလည်း ဂရုမစိုက်အားတော့ပါဘူး။ မီးမလာလည်း မီးသွေးနဲ့မီးမွှေးချက်ရတာပေါ့။ တနင်္ဂနွေဆိုလည်း ဒီလိုပါပဲ။ မနက်ဆို ညီအစ်မ နှစ်ယောက် ဈေးကိုသွား၊ သူက စားချင်တာကို လက်ညှိုးထိုး၊ ကျွန်မက၀ယ်၊ ပြန်ရောက်တော့ ချက်စားကြနဲ့ ပျော်စရာတော့ တော်တော်ကောင်းပါတယ်။
ချက်ပြီးတော့လည်း မပြီးသေးပြန်ပါဘူး။ ကြီးတော်လေးက အ၀တ်တွေကိုလည်း သယ်လာသေးတာ။ သူကတော့စာကျက်ပေါ့လေ။ ကျွန်မကတော့ လျှော်လိုက်၊ မီးပူတိုက်လိုက်၊ အိမ်သန့်ရှင်းရေး လုပ်လိုက်နဲ့ တစ်နေကို ကုန်ရော။ အိမ်မှာ အတူနေကြတဲ့ တစ်ခြားသူငယ်ချင်းတွေလည်း တနင်္ဂနွေနေ့ဆို အကုန်ဆုံကြတာကိုး။ သူတို့တွေလည်း ထမင်းတွေ ဟင်းတွေချက်၊ ပြီးတော့ အကုန်စုစားကြနဲ့ အတော်လေးကို ပျော်စရာကောင်းပါတယ်။ ကျွန်မတို့တွေ အားလုံးက ညီအစ်မတွေလို ဖြစ်နေပါပြီ။
ကျွန်မ ရန်ကုန်မှာ တက္ကသိုလ်စတက်တုန်းက သိပ်ကိုရီရတာ။ အိမ်မှာဆို ကျွန်မတို့က ဘာမှမလုပ်ရဘူးလေ။ ထမင်းကို ခူးပြီးသား အဆင်သင့်စား၊ အ၀တ်ကို မီးပူတိုက်ပြီးသား အဆင်ဝင့်ဝတ်နဲ့ ဘာဆိုဘာမှကို မလုပ်တတ်တာ။ အိမ်မှာက ကျွန်မအမေရဲ့ညီမ အဒေါ်အပျိုကြီးကလည်းရှိတော့ သူက တူမတွေအတွက် အကုန်ကို လိုက်လုပ်ပေးတာ။ မနက်မိုးလင်းရင် မုန့်က အဆင်သင့်၊ ကျောင်းသွားခါနီး ထမင်းခူးပြီးသား၊ ပန်းကန်တွေလည်း ဆေးစရာမလို၊ အ၀တ်တွေလည်းလျှော်စရာမလိုနဲ့ ကျွန်မ 10 အောင်ပြီးတဲ့အထိ ဘာဆို ဘာမှကို မလုပ်တတ်တာပါရှင်။ ကျောင်းလည်း လာတက်ရော ဒုက္ခနဲ့ လှလှနဲ့တွေ့ရော။ ထမင်းဟင်း မချက်တတ်လို့လေ။ အတူနေတဲ့ အစ်မတွေကိုမေး။ အမေကလည်း အလွယ်ဆုံး ဟင်းချက်နည်းတွေကို သင်ပေး၊ အဲတုန်းကဆို မှတ်မိပါသေးတယ် ကြက်ဥကြော်ရယ် လက်ဘက်သုတ်ရယ်နဲ့ပဲ နေ့တိုင်း ထမင်းစားရတာများတယ်။ ဟင်းမချက်တတ်လို့။ အိမ်က ပို့လိုက်တဲ့ အခြောက် အခြမ်းတွေကို မစားချင်လည်း ဖြစ်ညှစ်စားနဲ့ တော်တော်ကို စားလို့ မ၀င်တာ။ နောက်တော့လည်း ဒီလိုပါပဲ စမ်းချက်ကြည့်ရင်း တတ်သွားတာပေါ့။ ဟိုနေ့ကလည်း အိမ်ကို ညီမတစ်ယောက်က လာလည်လို့ ထမင်းတွေ ချက်ကျွေးတာ ဘာပြောသွားတယ်မှတ်တုန်း မထက် ထမင်းချက်တတ်တာ သူ့အတွက်တော့ ကမ္ဘာ့ အံ့ဖွယ် တစ်ခုလိုပါပဲတဲ့၊ ကောင်းရော။
နောက် ကျွန်မပျော်တာ တစ်ခုရှိသေးတယ်။ ကျွန်မညီမလေး နေရတဲ့ တစ်ကောင်းဆောင်က သထုံလမ်းမှာလေ။ အဲတော့ သူ့ကိုလိုက်ပို့ရင်း သထုံလမ်းကို လျှောက်ရတာလည်း ပျော်တယ်။ အရင်တုန်းကတော့ ကျောင်းသူ ကျောင်းသားတွေနဲ့ ပျော်စရာ ကောင်းချင် ကောင်းမှာပေါ့။ ကျွန်မတို့က ရွာသာကြီးမှာ ကျောင်းတက်ရတဲ့ ခေတ်ဆိုတော့ မမီလိုက်ဘူးပေါ့ရှင်။ ခုတော့ သထုံလမ်းမှာ အားကစား သမားတွေချည်းပါပဲ။ ပညာရေးတက္ကသိုလ်က ကျောင်းသူတွေကိုတော့ တွေ့ရပါတယ်။ တင်းနစ်စ်ကွင်းမှာ တင်းနစ်စ် ရိုက်နေကြတဲ့သူတွေ၊ ဘောလုံးကွင်းမှာ ဘောလုံးကန်နေကြတဲ့သူတွေ၊ အမျိုးသား အားကစားရုံမှာ လာဆော့ကြတဲ့သူတွေနဲ့ပဲ သထုံလမ်းကလည်း စည်ကားနေပါတယ်။ ညနေဘက်ကို အေးအေးလေး လမ်းလျှောက်ရတာ တော်တော်ကြည်နူးစရာ ကောင်းပါတယ်ရှင့်။
ဒီလိုပါပဲ ကျွန်မရဲ့ အားလပ်ရက်တွေဟာ ညီမတစ်ယောက်နဲ့တင် တော်တော်ကို အလုပ်များနေတော့တာ။ ဒီညီအစ်မကလည်း သိပ်ကိုချစ်ကြတာဆိုတော့ အလုပ်များပေမယ့် ပျော်စရာ ကောင်းတာပေါ့ရှင်။ ကျွန်မစဉ်းစားမိတာ တစ်ခုရှိတယ်။ ညီမတစ်ယောက်နဲ့တောင် ဒီလိုဖြစ်နေတာ မတော်တစ်ဆများ ယောင်္ကျားလေးဘာလေးရလို့ ကလေးတွေ ဘာတွေ မွေးခဲ့ရင် အိမ်ရှင်မ လုပ်ရတာ တော်တော်ပင်ပန်းမှာပဲလို့။……..တော်ပါပြီ စိတ်ကုန်တယ်.. တောထဲကသစ်ပင်ပေါ်မှာ သွားနေမယ်….. သြော် ပိုစ့်ရေးပြီးသွားလို့ သီချင်းဆိုတာပါ.. ဘာရယ် မဟုတ်ပါဘူး။
Filed under ရောက်တတ်ရာရာ and tagged myself, weekends |	5 Comments
strike on February 1, 2009 at 7:46 am said:
“မတော်တစ်ဆများ ယောင်္ကျားလေးဘာလေးရလို့ ကလေးတွေ ဘာတွေ မွေးခဲ့ရင်”…..ဟီ ဟီ
mmthinker on February 3, 2009 at 7:11 am said:
အိမ် on February 4, 2009 at 6:07 am said:
အဟီ မတော်တဆ ယောကျာင်္းကလဲ လိုချင်သေးသကိုး။ တော်သေးတာပေါ့ တော်တော်ဆဆဆိုရင်တော့
cuttiepinkgold on February 4, 2009 at 12:23 pm said:
သြော် ကျွန်မက ယောင်္ကျားယူဖို့ စိတ်ကူးမရှိဘူးလေ..ကျွန်မကို ယူမယ့်သူလည်း ရှိမှာမဟုတ်ဘူး အိမ် ရဲ့ ဒါကြောင့် ယောင်္ကျားရခဲ့ရင်လည်း မတော်တစ်ဆပဲ ဖြစ်မှာပေါ့ရှင့်။ တမင်တကာ ဖြစ်မှာ မဟုတ်ဘူး။
tazar aung on February 8, 2009 at 12:02 pm said: